Seo | Kyaw Chan Thar (KCT) Co., Ltd.
Scooter Power LE 4T 5W40(အဆင့်မြင့် အော်တိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်သုံး)
Technology – 100% Synthetic
Standard – API SL
Approvals – JASO MB
Packaging – 1L
Suitable – 4-stroke oil specifically designed for powerful and recent scooters.
100% Synthetic နည်းပညာကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပြီး JASO MB ထောက်ခံချက်ရရှိထားခြင်းကြောင့် ဆီစားသက်သာမှု ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ ဂီယာပွန်းစားမှုကို ကာကွယ်ခြင်း၊ အင်ဂျင်အတွင်း သံချေးတက်ခြင်းနှင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ မည်သည့်လမ်းတွင်မဆို စိတ်ချယုံကြည်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း။
Scooter Expert LE 4T 10W40(အဆင့်မြင့် အော်တိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်သုံး)
Technology – Technosynthese
Suitable – 4-stoke oil specifically designed for 4-stoke engines for powerful.
Technoynthese နည်းပညာကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပြီး JASO MB ထောက်ခံချက်ရရှိထားခြင်းကြောင့် ဆီစားသက်သာမှု ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ ဂီယာပွန်းစားမှုကို ကာကွယ်ခြင်း၊ အင်ဂျင်အတွင်း သံချေးတက်ခြင်းနှင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ မည်သည့်လမ်းတွင်မဆို စိတ်ချယုံကြည်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း။
Scooter LE 4T 10W30
Technology – HC-Tech
Standard – API SJ
Packaging – 0.8L
Suitable – For 4-stoke scooter engines.
HC-Tech နည်းပညာကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပြီး JASO MB ထောက်ခံချက်ရရှိထားခြင်းကြောင့် ဆီစားသက်သာမှု ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ ဂီယာပွန်းစားမှုကို ကာကွယ်ခြင်း၊ အင်ဂျင်အတွင်း သံချေးတက်ခြင်းနှင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ မည်သည့်လမ်းတွင်မဆို စိတ်ချယုံကြည်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း။
Mineral နည်းပညာကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပြီး JASO MB ထောက်ခံချက်ရရှိထားခြင်းကြောင့် ဆီစားသက်သာမှု ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်း၊ ဂီယာပွန်းစားမှုကို ကာကွယ်ခြင်း၊ အင်ဂျင်အတွင်း သံချေးတက်ခြင်းနှင့် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်း၊ မည်သည့်လမ်းတွင်မဆို စိတ်ချယုံကြည်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ခြင်း။
Scooter Gear 80W90(Transmission Oil For Scooter)
Standard – API GL-4
Packaging – 0.120L
Suitable – API GL-4 ကိုရရှိထားပြီး အဆင့်မြင့် Mineral နည်းပညာကိုအသုံးပြုထား သောကြောင့် ဂီယာဘောက်စ် အတွင်းဖြစ်ပေါ်တတ်သော် မြင့်မားသောအပူဒဏ် (Extreme Pressure)ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဂီယာ၏ သက်တမ်းကို တိုးမြင့်ပေးနိုင်ပါသည်၊
ဂီယာအချိန်းအပြောင်း ညက်ညောမှုရှိပြီး ယာဉ်အနှေးအမြန်မောင်းနှင်မှု စွမ်းအားကို တိုးမြင့်စေပါသည်။ အကောင်းဆုံးသော စွမ်းအားမြင့် additives များထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့် မြင့်မားသော အပူဒဏ် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ဂီယာဘောက်စ် သက်တမ်းကြာရှည်ခံနိုင်ပါသည်။
No. 33, U Wisara Road, 34 Block, North Dagon Township, Yangon, Myanmar
+959892840078
© 2018-2021 KYAW CHAN THAR Co., Ltd. All rights reserved.
Passenger Car Engine Oil Tranmission Fluid Heavy Duty Diesel Engine Oil Motorcycle Engine Oil
Scooter Engine Oil Hydraulic Fluid Racing Engine Oil Classic Engine Oil